Fanavaozana azo alaina ho an'ny htc Hero | Androidsis
Fanavaozana ho an'ny HTC HERO AZONAO IZAO
antocara | | HTC, About us, Rom
Avy amin'ny pejy ofisialin'ny Htc Spain ny fanavaozana ny terminal dia azo sintonina izao Mahery fo htc avy amin'ny mpandraharaha Orange afaka. Miaraka amin'ity fanavaozana ity amin'ny la rom 2.73.405.5 ny interface dia voarindra bebe kokoa Htc Sense ary noho izany manatsara ny traikefan'ny mpampiasa. Ho fanampin'izay, azo atao ny manatsara ny fifantohan'ny fakantsary napetraka amin'ny telefaona.
Ho an'ny fametrahana dia asaina mamaky tsara ireo torolalana voatanisa eto. Izy io dia azo havaozina amin'ny solosaina misy Windows XP Sp2 na Windows Vista napetraka ihany, ary tsy maintsy nametraka ihany koa ianao HTC Sync amin'ny solosaina. Amin'ny alàlan'ny fampifandraisana ny telefaona amin'ny solosaina ary rehefa fantany izany, dia manatanteraka ilay rom izay efa nalaintsika teo aloha isika ary tsy maintsy miandry ny famaranana azy fa tsy zavatra hafa. Tandremo sao voapetraka ny bateria ary alao ny fomba fihenan'ny hibernation an'ny PC.
Ao amin'ny horonan-tsary dia afaka jerentsika ny terminal htc hero miaraka amin'ny fanavaozana efa napetraka.
Havaozina: ny rom izay miseho amin'ny pejy htc ofisialy dia ho an'ny terminal maimaim-poana. Tsy maintsy hanangana ny fanavaozana ny tenany ny mpandraharaha Orange
UPDATE 20/09/09: Azo alaina ao amin'ny tranokalan'ny Htc UK misintona ho an'ny Htc Hero nataon'i voasary avy any amin'io firenena io. Htc Hero Orange any Espana Latsaka.
UPDATE 01/10/09: Azo alaina amin'ny htc Hero Orange any Espana ankehitriny, jereo eto.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » HTC » Fanavaozana ho an'ny HTC HERO AZONAO IZAO
Er1k dia hoy izy:
Eny, tsy avelako hisintona ny rom .. rehefa apetrakao ny laharana serial dia miteny amiko izy hoe:
Miala tsiny izahay fa ny rindrambaiko tianao halaina dia tsy misy amin'ny maodelin'ny fitaovanao.
Valio i Er1k
ary eny, manana HTC Hero xD aho
Luis Gil dia hoy izy:
Tsy izaho koa, ary manana Hero Hero Orange koa aho. : PP
Valiny tamin'i Luis Gil
imolinos dia hoy izy:
Iray hafa izay mitovy ihany, jereo fa navelany hisoratra anarana ny tranokala HTC my Hero miaraka amin'ny nomeraon-dehilahy aho, fa izao kosa tsy avelany hisintona azy aho.
Andeha hojerentsika raha misy olona tsara fanahy manantona ny ROM any ho any mba hahafahantsika misintona azy sy manavao azy.
Mamaly an'i imolinos
Fantatrao raha mamafa ny sarinao, ny fifandraisana ary / na ny mozika izy?
Mamaly an'i josep
Valiny fohy: ENY
Valiny lava: ny ataon'ny fanavaozana dia endrikao ny Heroo ary apetaho ilay Android vaovao. Toy ny rehefa mamolavola ny PC ianao hametrahana Windows / Linux vaovao
Ka nisy nahavita naka azy io? Oo
Voalaza ao fa ny safidin'ny mpandraharaha rehetra eto amintsika dia ho voafafa amin'ny zavatra hafa. Azo antoka ve fa tsara ity fanavaozana miaraka amin'ny Orange ity? Mametraka izany any amin'ny tranonkala ofisialy ve izy io?
Nisy nahavita izany ve ary afaka manome ny fijoroany ho vavolom-belona? Ahoana no ahafahako mitahiry ny fifandraisako rehetra sy ny angona hafa izay hofafana.
Valio ny Kaderitra
Ny ROM an'ny pejy ofisialy dia ho an'ny Maherifo maimaimpoana.
Tsy dia apetraka loatra amin'ity lohahevitra ity aho fa nahita rindranasa eny an-tsena handika ny fifandraisana ao ivelany. Mitadiava contact2sim izay maimaim-poana ary mandeha.
Ny tiako holazaina dia ny "kopia ny fifandraisana amin'ireo sim", mbola tsy fantatry ny Maherifo ny anaran'ny karatra.
Xhaz dia hoy izy:
Rehefa nojerena dia nakariko ilay rom miaraka amina nomerao serial avy amina terminal maimaim-poana ary napetrako tao amin'ny Orange Hero, saingy fotoana fohy taorian'ny nanombohana ny fametrahana dia nofoanana izany ary nilaza taminao fa tsy afaka atao izany.
Ka tsy maintsy miandry ny kinova volomboasary isika: S
Valiny tamin'i Xhaz
Ny fanavaozana ny UK Oange dia efa hita ao amin'ny pejy htc UK. Ho an'i Espana dia milatsaka izy
ury dia hoy izy:
Eny, maka fotoana kely izy ireo, tsia ... lasa ireto lamba volomboasary ireto! any Espana foana no farany .. io asko io
Mamaly an'i ury
Mariam dia hoy izy:
fa ny an'ny voasary milaza zavatra momba an'io? lazao hoe rahoviana no hivoaka izy io? Nandany antsasak'adiny niadiako tamin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa aho ary ho fanovana tsy nisy olona nieritreritra, tsy fantatr'izy ireo akory fa Android izany ary mainka ny fanavaozana izany! mandreraka!
Valiny tamin'i Mariam
Izany no ananan'ireto orinasa ireto. Movistar dia nanavao ilay nofinofy cupcake andro vitsy lasa izay ary na inona na inona angatahinao dia tsy nilaza na inona na inona taminao izy ireo. Raha tao amin'ny CMT aho dia ho hitan'izy rehetra izany.
Irwyn dia hoy izy:
Manana ORANGE HTC HERO vaovao aho ary niasa tanteraka. Nametraka ny firmware vaovao aho:
Fanatsarana ny ROM ho an'ny HTC Hero (Orange) _2.73.61.5
izany dia ao amin'ny tranonkalan'ny htc ary tonga lafatra ny zava-drehetra.
NY OLANA dia izao tsy afaka misintona programa amin'ny tsena Android aho.
Rehefa miditra amin'ny tsena Android aho dia miandry ny «Android Market Terms of Service. Manome ... »ary tsy hiala eo mihitsy.
Fantatrao ve ny fomba famahana azy? misy fomba fiverenana mankany amin'ny ROM tany am-boalohany ve sa iray vaovao manamboatra an'io?
Valiny tamin'i Irwyn
Irwyn, zavatra mitovy amiko no mitranga. efa voavahao ve?
Valiny amin'ny max
Salama tsara ho an'ny rehetra, manana maherifon'ny volomboasary namboarina avy any imei aho, sintomiko ny fanavaozana ary milamina ny zava-drehetra fa rehefa manandrana manokatra ny fisie amin'ny windows aho dia manapaka ahy ny telefaona. misaotra miarahaba
Salama tsara ho an'ny rehetra, manana maherifon'ny volomboasary namboarina avy any imei aho, sintomiko ny fanavaozana ary milamina ny zava-drehetra fa rehefa manandrana manokatra ny fisie amin'ny windows aho dia manapaka ahy ny telefaona. misaotra miarahaba. Andao hojerentsika raha misy afaka manampy ahy
FORE SPEED, Lalao 3D ho an'ny Android
FACEBOOK ho an'ny ANDROID any ambadika